50 First Dates(2004) – Channel Myanmar
50 First Dates 10 June 2004
သစ္စာနီကပြောတယ် အချစ်ဆိုတာ ဆပ်ပြာဖူဖောင်းတဲ့ တာရာမင်းဝေကတော့ အချစ်ဆိုတာ မသိစိတ်ရဲ့တည်ရှိခြင်းနဲ့ ဖြစ်ခြင်းကြားက
လျှို့ဝှက်သောဆုံမှတ်တဲ့ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ကတော့ အချစ်စစ်ဆိုတာ တစ်သက်မှာတစ်ခါပွင့်တဲ့ ပိတောက်ပန်းရဲ့သစ္စာတရားနဲ့ခိုင်းနှိုင်းထားတယ်
အချစ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုတော့တစ်ချို့ကပြောကြတယ် ဟန်ဆောင်မှုတွေကျော်လွန်ပြီး သတ္တိတွေရဲ့အလွန်ကိုတွန်းပို့ခြင်းခံရတဲ့လုပ်ရပ်တဲ့ ရူးသွပ်မိုက်မဲခြင်းလို့လည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းခေါင်းစဉ်တပ်ကြတာလည်းရှိတယ်….ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာ မိုက်မဲခြင်း
လုပ်ခဲ့ကြတယ် ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေကြားမှာ အချစ်ကြောင့်ရူးသွပ်သွားတာကတော့ အရမ်းချိုမြိန်ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းပါတယ် …..ဘာလို့ဆို
ချက် အချစ်ကိုတခြားအရာတွေက ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာမှမဟုတ်တာ………
ကတောင်ပြန်ချိန်းသွားတယ်….နောက်တစ်နေ့မှာ ကောင်မလေးနဲ့တွေ့တော့ သူနှုတ်ဆက်မိတယ်…ထူးဆန်းတာက ကောင်မလေးရဲ့တုန့်ပြန်မှုပဲ…
ခပ်စိမ်းစိမ်းကြည့်ရင်း ဘာတွေလာကြောင်နေတာလဲဆိုတဲ့ခွန်းတုံပြန်မှုကြောင့် သူဆွံအသွားတယ်….
နောက်မှသိလိုက်ရတာက ကောင်မလေးဟာ ကားမတော်တဆမှုကြောင့် ခပ်ဆန်းဆန်းအတိတ်မေ့ရောဂါရနေတာပါပဲ…..
ကျွန်တော်ပြောတဲ့ သတ္တိတွေရဲ့အလွန် ရူးသွပ်မိုက်မဲခြင်းဆိုတာ အဲ့ဒီမှ စတာပဲ…ဆက်ပြောရင် ပေါ့သွားမှာစိုးရိမ်လို့ ဒီတင်ပဲနားပါရစေ….
” ခင်ဗျား တို့ ကျွန်တော့ကိုရူးတယ်ပဲပြောပြော
မိုက်မဲလွန်းတယ်ပြောပြောရပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပျော်တယ် ကျွန်တော့ဘ၀ဟာ သူမပါ…. အားလုံးအတွက်ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်..
ကျွန်တော့ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်နေမိတယ်ဆိုရင် သေချာတယ် ခင်ဗျားဟာ အချစ်ကိုမကြုံဖူးသေးသလို ကျွန်တော့လိုအချစ်စစ်တစ်ခုနဲ့မချစ်ဖူးသေးလို့ပါပဲ….”
ဒီကားလေးပြီးတော့ လူရွယ်က ကျွန်တော်တို့ကို အသံတိတ် ဒီစကားလေးပြောသွားတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်မိတယ်
File Size…(850MB) and (359MB)
Encoder… Phyo Pyae
Translated by Htet Myat
Option 1 openload.co 911MB
Option2openload.co 361MB
Option3Soliddrive.co 850MB
Option4Soliddrive.co 359MB
Option5drive.google.com 850MB
May Be This Time(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး 2014
Sorry for Your Loss (2018) 2018
The Road Runner Show (1966–1973) 1966–1973
The Gods Must Be Crazy III Crazy Safari (1991) 1991
[18+] Time Adventure:5Seconds Til Climax (1986) 1986
Good Luck Chuck (2007) 2007
Camp Rock 2: The Final Jam(2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
The One (2017) 2017
Virginia Minnesota (2019) 2019
Heaven’s Soldiers ( 2005 ) 2005
Hot Young Bloods (2014) 2014